President Bihi On His Government's Effort On The Corona-Virus Epidemic Crisis. - Page 7 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
What an evil excuse for a human!! These poor police officers should now be quarantined and all the security forces should be taught the basic safety procedures.
President Muuse should order the security forces to shoot dead any idiot who tries to escape like this ever again. No mercy should be shown to idiots like this one.
Meeshan ha laga dhiso dhakhtarka waalida ee aduunka ugu wayn.
Coronavirus waxay u fahmeen inuu qofka maskaxda kaga dhaco.
War lugta qabo oo soo jiid kulahaa.
Kuwan magaca ay aqoonsiga ku doonayaan inay "somali" ka reebaan yaa wax wayn noo ah.
Run ahaantii haddii aanu magac kale 1191kii la bixi lahayn maanta aduun waynuhu nagumuu khaldeen kuwa bilaa damiirka ah ee aad taageerto.
Ceeb maleh walaalo hadaad magac kale ku duulaan tagtaan oo aad iska daysaan magacan xumaaday.
Jawaan qamadi ah sidaa looma jiido iska daa banuu-adam ilaahay kareemeeyay.
Waa galbeedka burco nimanka sidaa loo bah-dilayo iyo reer oodweyne.
Reer saaxil lama joojiyo iyo xataa kuwa u shaqeeya sida kan arimaha dibadda u dirsadeen
Miyaa la joojiyay? Maya
Ma dadkaa ganbadhka kaa dhigtay yaad difaacaysaa?
Somaliland flag face masks
Saaxiib, ma adiga oo maalinkaas maanta ah Kiinyaati Ugaali-soo-cune ah iyo Amxaar qaydhin-ka-dharge ah ay kugu xukumaan gobolkaagii ayaa dad kale waxa ka sheegaya? Waliba dad kale oo dalkoodii jooga oo aan cid kalana aaney u talin aan ka aheyn nin madax-weyne ah oo dalkooda laga soo doortey.
Ma kula tahay hadii xisbiga Wadani iyo Mudane Cabdiraxmaan Cirro ay dalka ka talinayaan in ay boliisku ay odhan lahaayeen si kale aanu ula dhaqano nin "karantiilkii" lagu hayey kasoo baxsadey oo dambiile ah, oo dadkiisii iyo cayladiisii gurigiisa joogtey khadar caafimaad lasoo doontey?
Ina-Gummeedow, hacooyow, horey ayaan kuugu sheegay oo aan in badan ku idhi inta aanad iska soo dhatakhleyn, oo aanad hadal calyo ah ku soo haqaacin, iska hubi waxa aad ku hadleysaa in aanu adiga waran dib kuugu soo noqda oo ku boqno-gooya aanu kugu noqon.
Maanta Soomaali reerka ugu liitaa waa tolkaagii oo Gedo lagu xukumo, kii ay madax-weyne u ahaana uu yahay nin "marti" u ah reerka uu ka qabo ee reer deyniile iyo Raysal-Wasaarihiisa. Oo waliba ku darsoo aanu aheyn nin Xaafad magaalada Xamar kamid ah tagi kara hadaan kuwa lasoo kireeyey ee Afrikaanka calooshood-u-shaqaystayaal ahi aaney gacanta heynin sidii ilma-yar oo caruur ah oo aaney ilaalineynin.
Sharciga hadaad diido inay u sinaadaan reer berbara iyo reer oodweyne waxaad shahadeeda qaadanaysaa ina gumeednimo waana midda iminka kaa muuqata.
Nimankan iskama soo baxsan adeer kaligood yaa la reebay intii geed macaanka ahayd waa la fasaxay.
Midda kalle ma cirro yaad ka rajo qabtaa inuu snm xukumo?
Siday u gees garaacayeen yuu daciif noqday agaasime laguma aamini karo.
Rajada kaliya oo aad ku baxsan kartaan sanadkan waa idinkoo soomaali weyn ku dhex milma
Intaa ka badan yaan laydin bah-dilin
Koonfurta waad la gaajoon
Waana la qarxi
Balse adigoo nool ku jiidi maayaan taas anaa kuu balan qaaday kaalay tol-weynaha dhinac ka raac.
Waligaa ma aqoonsi yaad wax ka dooni xataa hadii shaatiga lagaalo baxo.
Taasi waa tanac-tanacdii aan kugu ogaa iyo Ina-Gummeednimo aad ilaa iyo 1991 dhex-fadhidey. Sidaa-daraateed, wax kasoo qaad ma lihid. Somaliland siyaasadeeda-na waxba kama taqaanid ee ha ku dawakhin.
Reerkan aad ka hadleysaana looma taliyo (sida adiga oo kale) ee iyaga ayaa Somaliland ah oo dantooda siyaasadeed ayaa taas tustey. Mana aha kuwa dalkooda Somaliland ah iyo inta ay ka tagaan oo ah Ceerigaabo ilaa iyo Hargeisa iyo shan gobol oo Somaliland ah ku badalanaya cad-quudheed iyo kursi wasiir lagu magacaabo oo Xamar iyo Villa Somalia laga bixiyo.
Intaas waa iskala weyn nahay naftayada oo ma nihin niman Amxaar gobolkoodii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ku dhex yiil uu ku xukumo sida adiga iyo tolkaa "Ilka-yar-Mareexaan" maanta heysata. Maadaama aat tihiin niman lagu xukumo gobolkoodii Gedo ahaa.
Markaas, saaxiib, meel aad wax aad ka macaashtaa ama aad dood kasoo "cidhiidsataa" kaagama banaana Somaliland gudaheeda iyo kurisiga dhextooda yaal, ee adigu maalin uun nin rag ah oo xiniinyo leh noqo oo tolkaa heeryadda gumeysiga Amxaarada iyo Kenyatiga ah ee saaran ka tuur. Ama tolkaa ku guubaabi in ay xiniinyo wadareed lasoo baxaan oo gobolkooda xoreystaan si Soomaali usoo dhex istaagi karaan iyaga oo aan hoos loo eegeynin. Waakaas wixii kugu waajib ah, hacooyow.
Cirro iyo waraabe labaduba waxay u hadal egyihiin beelaha laga tirada badan yahay markay qudbaynayaan.
Aragtidayda waxa meeshaa gaarsiiyay waa talo xumada.
War anagu soomaali kama go'i karno yaa koobkooda buuxin kara.
Ninkii xukunka haya beeshiisa lagama daba hadlo xataa haday sharciga jabiyaan waa dhaqanka dawlad qabiileedka.
Ciil qabe talo looma dhiibo dhib badan yaa ka imaanaya sidaa daraadeed, meeshaad wax ku ool tayo leh ku noqon karto waa tol waynaha soomaaliyeed
Kaalay walaale soo dhawoow anagaa kuu baahan sadex habrood isma indho buuxin karaan haday kala adkaadaana waa arrin kale wali madaxa ciiid kuma lihid inta yarta iska jaf oo soo orod.
Lool, waakaas, Ina-Gummeedkii iska soo ciyey oo naxli soo matagey. Saaxiib, haku meereysan Duriyadda iyo Somaliland guud ahaan iyo kursigooda sida ay ugu heshiinayaane. Ee ka tali kuwa adiga oo kale ah ee lagu gumeysto dhulkoodii iyo gobolkoodii oo ah dad duleysan oo wadamada darisku ku xukumaan xaafadoodii. Waakaas, hadal-tiris uun ha dhurine, waxa xil kuu ah.
And now back to the COVID-19 issue after we seemed to have been detained (or were forced to digress) due to the falling "trolling tactics" of this low-born sniffling creature call Gooni.
Hence, if we are to return to where we were with this issue in Somaliland, we can say that in here, below, is the recently established COVID-19 health-care free-toll call center in which folks are free to call if they seem to think they have the "symptoms" of this virus and what sort of health information they need to be can be given to them by the emergency doctors who are there, as well as what extra help can be offered to them.
And so far it has been encouraging signs since the public is taking it seriously and are calling this free-toll number.
Ma﻿ ﻿dadkaa﻿ ganbadhka kaa dhigtay yaad difaacaysaa?
Haddii lagu yidhaahdo laba kala dooro: 1.walaalkaa gabadh hakaa dhigto
2. nin walba oo diir madaw oo gaal ahi dusha hakaaga kaajo, keebaad dooran lahayd?
12 hours ago, Tallaabo said:
Hadaan caqli ku ogahay walaalkay yaan dooran lahaa, balse hadii uusan caqli uu kaaga kaco lahayn yuusan ku bakhtiin gaalka caqliga leh dooro.
They recapture one of the covid-19 postive guys who escaped!